Nalain’olona an-keriny teny Ambodivary Ambohitrarahaba, omaly hariva, ny zazavavikely iray 6 taona. Razafindrazaka Hiancy ny anarany. Niangavy ny fianakaviany mba hampilaza haingana eny zandary na polisy ho an’ireo olona manana loharanom-baovao momba ity raharaha fakana an-keriny zazavavikely ity.
Trano ampolony indray kilan’ny afo tao amin’ny kaominina Tsinjoarivo 22, omaly nandritra ny famadihan-drazana nataon’ny fianakaviana iray tany an-toerana. Afo niparitaka nataon’ireo mpamadika nandritra ny fandrahoana sakafo no nahatonga ny loza. Tsy nisy ny aina nafoy.
Nampisavorovoro saim-bahoaka ny fahafatesan’olona iray tao Ankirihiry Avaratra Toamasina, ny faran’ny herinandro teo. Nisy olona maty tampoka tamin’io fotoana io ka nantsoina ny BMH. Nilaza ny dokoteran’ny BMH fa hoe matin’ny pesta ilay olona. Teo am-piomanomanana ny hanaovana ny fandevenana azy ny BMH vao fantatra taorian’izay fa tsy pesta no nahafaty ilay olona fa aretina efa nitaizana azy hatry ny ela.